နိုင်ငံတကာ ဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် ဆုအနေနဲ့ ဆန်ကာတင် စာရင်းဝင်နေတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Zone
နိုင်ငံတကာ ဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် ဆုအနေနဲ့ ဆန်ကာတင် စာရင်းဝင်နေတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ပရိသတ်တွေ အချစ်တော် အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ကတော့ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ ရပ်တည်ခဲ့တာကို လေးစားစွာတွေ့ရပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း နှစ်ယောက်လုံးက ၅၀၅(က)နဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူခံထားရတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနေ့မှာတော့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ” What happened to the Wolf? ” ဇာတ်ကားမှာ အူဝဲနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ နှစ်ယောက်က နိုင်ငံတကာ ဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ဆန်ကာတင် စာရင်း ဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ် ။
ဒီသတင်းကို ကြားသိကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရော အနုပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းက ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူကြသလို စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီသတင်းကို မျှဝေပေးရင်း ဇာတ်ကားထဲက ပုံရိပ် အချို့ကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
ႏိုင္ငံတကာ ဆုေပးပြဲမွာ အေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ ဆုအေနနဲ႔ ဆန္ကာတင္ စာရင္းဝင္ေနတဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္နဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသု
ပရိသတ္ေတြ အခ်စ္ေတာ္ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္နဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ကေတာ့ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ ရပ္တည္ခဲ့တာကို ေလးစားစြာေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ေယာက္လုံးက ၅၀၅(က)နဲ႔ အမႈဖြင့္အေရးယူခံထားရတာျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒီေန႔မွာေတာ့ ဒါ႐ိုက္တာ ဏႀကီး ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ” What happened to the Wolf? ” ဇာတ္ကားမွာ အူဝဲနဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ ႏွစ္ေယာက္က ႏိုင္ငံတကာ ဆုေပးပြဲမွာ အေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ဆန္ကာတင္ စာရင္း ဝင္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။
ဒီသတင္းကို ၾကားသိၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြေရာ အႏုပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းက ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူၾကသလို စိတ္မေကာင္းလည္းျဖစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္ ။ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ဒီသတင္းကို မွ်ေဝေပးရင္း ဇာတ္ကားထဲက ပုံရိပ္ အခ်ိဳ႕ကို ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ။
ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ မိမိုက်နေတဲ့ အလန်းစားပုံလေးတွေ ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ပေးလိုက်တဲ့ ကျော်ထက်အောင်
လူကြီးတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီနေတဲ့သားလေးကို ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ မေမေမိုးယုစံ
အမေစုရဲ့ Mask ချုပ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဒုတိယဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိသွားခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာ မျိုးမင်းစိုး